'समीक्षाजी पलसँगको वास्तविकता कहिले बाहिर ल्याउने ?' -
VoiceNp	प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ १३, २०७८ समय: १२:३७:२०
सामाजिक संजालमा वास्तविकता खुलाउँछु भनेको एक साता बितिसक्दा पनि समीक्षाले भने अहिलेसम्म वास्तविकता बाहिर ल्याएकी छैनन् । त्यसैले पनि सामाजिक संजालमा उनी प्रति प्रश्न गर्न थालिएको छ ‘समीक्षा जी पलसँगको वास्तविकता कहिले बाँहिर ल्याउने ? पछिल्लो समय समीक्षा र पल मिडियाकर्मीसँग भने टाढा भागिरहेका छन् । सम्बन्धको बिषयका प्रश्न तेर्सिने डरले उनीहरुले मिडियाबाट दुरी बनाएका हुन् ।